को हुन् ती युवती जसलाई पारस शाहले मध्यराति ठमेल घुमाए ? – Dainik Sangalo
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १२, २०७८ समय: १२:३१:२२
काठमाडौ । केही समयअघि चक्रपथमा हेल्मेट नलगाई बाईक चलाएका कारण बिबादमा आएका पूर्वयुवराज पारस शाहको यतिबेला फेरि अर्को विवादित भिडियो सार्वजनिक भएको छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा सार्वजनिक भएको उक्त भिडियोमा पारस एक युवतीलाई मध्यरातमा आफ्नो बाइकको पछाडि राखेर ठमेलमा हुँ’इ’किरहेका देखिन्छन्।
हेर्दा निकै आर्कषक र पारस भन्दापनि अग्ली देखिएकी ती युवतीले पारसलाई पछाडिबाट च्याप्प समातेकी छिन् । भिडियोमा देख्दा उनीहरुमा निक्कै निकटता रहेको बुझिन्छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले भिडियोमा पारसको ध’ज्जी उ’डा’इउँदै सोनिका रोकाय त हैनन् फेरी अर्की को युवती च्या’पे’छन् भन्दै पोष्ट गरेका छन्।
यसअघि पारसको सोनीकासँग नाम जोडिदै आएको थियो । उनीहरु पोखरामा बाइकमा हुँइकिएको भिडियो पनि त्यतिबेला निकै भाइरल बनेको थियो।-अनलाइन नेपाल
७७ जनाको ज्यान जोगाउने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासँग रहेकी यी महिला को-पाइलट को हुन् ? (भिडियोसहित)के बुद्ध एयरको जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए ? पाइलट शेर्पासँगको फोटो यसरी भयो भाइरल (भिडियो सहित)पाइलट शेर्पा भन्छन्– यस्तो कहिल्यै भएको थिएन, सायद म ड’राएको भए जहाज बीचमै खस्थ्यो होला
Last Updated on: September 28th, 2021 at 12:31 pm